७९५ नागरिकलाई एक जना प्रहरीको सुरक्षा ! – SindhuKhabar
गृहपृष्ठ ∕ समाज ∕ ७९५ नागरिकलाई एक जना प्रहरीको सुरक्षा !
७९५ नागरिकलाई एक जना प्रहरीको सुरक्षा !
Sindhu Khabar असोज २७, २०७७ गते १२:१७ मा प्रकाशित
एक जना प्रहरीले कति जना नागरिकलाई शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन सक्लान् ? तपाइको जवाफ हुनसक्छ ५,१० वा बढीमा एकसय जनासम्मलाई । तर हाम्रो जिल्लाको वास्तविकता त्यो भन्दा बिल्कुल फरक छ–एक जना प्रहरीले ७ सय ९५ जनालाई सुरक्षा दिनुपर्ने वाध्यता छ । सुन्दा अनौठो लागे पनि सिन्धुपाल्चोकमा पुग्दो प्रहरी कर्मचारी नहुँदा एकै जना प्रहरीले झण्डै ८ सय जनालाई शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनुपर्ने अवस्था छ ।
उसै पनि भौगोलिक विकटता र अर्को तर्फ सिमित स्रोत साधनका बावजूद यतिका धेरै नागरिकलाई एक प्रहरीले कसरी सेवा प्रवाह गर्लान् प्रश्न गम्भिर छ तर जिल्लाभर अहिले प्रहरीका बिभिन्न युनिटहरुमा गरी ३ सय ६२ जना प्रहरी सुरक्षाकर्मीको दरबन्दी छ । दरबन्दी भएका पनि केहि प्रहरी काजमा अन्येत्र काम गर्छन् । बाँकी जनशक्तिले सिन्धुपाल्चोकका २ करोड ८७ लाख ७ सय ९८ जनालाई शान्ति सुरक्षा दिनुपर्छ । यो हिसावमा एक प्रहरीले ७ सय ९५ जनालाई सुरक्षा दिनुपर्ने अवस्था छ । जनशक्ति,स्रोतसाधन पर्याप्त छैन । र पनि हामिले शान्ति सुरक्षा अमनचयन कायम राख्न कुनै कसर बाँकी राखेका छैनौ–जिल्ल प्रहरी प्रमुख एसपी राजन अधिकारीले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार प्रहरीले सिन्धुपाल्चोकवासीको सुरक्षा,नेपाल प्रहरीको सेवा र सदिक्षा भन्ने मूल मर्मलाई आत्मसाथ गर्दै काम गरिरहेको अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
यसवाहेका दसैं,तिहार छठलगायत बिभिन्न चाडपर्वका बेला हुनसक्ने बिभिन्न आपराधिक घटनामा प्रहरी निगरानि र सक्रियता बढाउनुपर्ने हुन्छ । नियमित कामकाज वाहेक हुने त्यस्ता कामको लागि जनक्तिको खाँचो पर्छ । तर पुग्दो छैन् । चाडपर्व लक्ष्यीत बिषेश प्रहरी सुरक्षा योजना निर्माण गरी सादापोशाकमा समेत प्रहरी ब्यापक परिचालन गर्न लागिएको प्रहरीले जनाएको छ ।